विचार | Indrenionline.com | Page 3
गोविन्द खड्का नमस्कार,खुट्टा भुईमा टेकेर मोटरसाइकल अड्याउँदै हात जोड्नुभयो, मुसुक्क हाँसेर हातमीलाउन अगाडि बढाउनुभयो । उमेर र बैंशले छलापुर भएका युवाले नमस्कार फर्काए । सौहाद्र्ध पुर्वक हात मिलाए । के छ तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ ? चिनजान नहुँदै सोध्नुभयोे । यो ठाउँ अति राम्रो बनाउनु भा छ । सुन्दर छ । युवाहरुका अनुहार र वरपरको वातावरण तर्फ आँखा ...
प्रतीक्षा पौडेल “Justice for victim , Justice for Nirmala!” आजभोलि जहाँ पनि यहि कुरा सुनिन्छ ।संसद भवन देखि लिएर स्कुलका कक्षाका कोठा सम्म,बच्चा देखि वृद्धका ओठ सम्म । बहिनी बिहान निस्किन्छिन निर्मलाको न्यायको लागि जुलुसमा जानु पर्ने रे । अनि म उसलाई प्रश्न गर्छु। बलात्कार भनेको के हो ? थाहा छ तिमिलाइ ! यो डर लाग्दो रोगबाट कसरी बच्ने केही जानेकी छौ ...
व्यवसायीक एकिकृत कर जरुरी
गोविन्द खड्का एउटा पसल वा व्यवसायको अफिसमा पस्दा नेपाल सरकारको लोगो सहितको गतिलो प्रमाणपत्र टंगिएको देख्दा सुहाउ“थ्यो होला । अनुगमन टोलि पुग्दा त्यो देख्यो नै केहि बोल्नु नपर्ने हुन्थ्यो । सर्बसाधारण, अनपढ नागरीक पुगेपनि त्यहि देख्थे र कारोबार गर्थे । उनिहरु झुक्किनु पर्देन्थयो । कर तिर्ने र दर्ता भएको पसल व्यवसाय बाटै खरीद् गर्थे । सर्बसाधारणको बिल पास हुन्थयो । ...
शु-समाचारका नाममा धर्मप्रचार बन्द गर
गोविन्द खड्का आ“गनमा भर्खरको घाममा सेकिदै कान्तपुरमा घोरीएको थिए“ । नजिकै भिम र दिनेश पनि गफिदै थिए । त्यहि ठाउ“मा दुई जना टाई सुट लगाएका, खाता पिता, सुकिला मुकिला युवक हाम्रो नजिकै आए । एक जना केहि बोलेनन् । अर्कोले केहि कुरा गर्न पाउछु कि ? भनेर अनुमति मागे, हुन्छ के कुरा हो ? भन्नुस्न, हामिले अनुमति दियौ“ । तिनले ...
स्यावास ! सन्दिप नेपालीको गौरव बन्नु
कृष्णदेव थापा मगर कुरा हो स.न. २००२ (वि स २०५९) तिरको, जब म कक्षा ८ मा पढ्थे । आफ्नो घरको छानोमा राखिएको एन्टिना हल्लाउदै क्रिकेटका विभिन्न खेलहरु खुव चाख लगाएर हेर्ने गर्थे । मेरो वाल्यकालमा भारतमा वितेकाले त्याहाँ क्रिकेट खेल हेर्दा हेर्दा त्यस प्रति मेरो एक प्रकारको लत नै बसेको थियो । अझ भनौ विश्व कप क्रिकेट २००३ बाट म ...
ताइवान पुगेको तेस्रो दिन हाम्रो ‘स्पोन्सर’ माइटेक कम्पनीले स्मार्ट पद्धतिबाट सञ्चालन भएका ठाउँ देखाउने कार्यक्रम थियो । ताइवानको प्रविधिमा प्रभावशाली भूमिका खेलेको माइटेकले विश्व बजारमा विद्युतीय डिभाइसका लागि चिप्स निर्माण गर्दोरहेछ । आधुनिकताको जलप लगाएको ताइवान कुनै पनि खोट लगाउन नसक्ने कुनै षोडसीजस्तो थियो । अझ त्यसमा भर्खरै निर्माण गरिएको ‘न्यु ताइपेई सिटी’ आफैंमा सौन्दर्यको बलियो प्रमाण थियो । विकासको ...
मानसिक तनावले हृदयाघात
मानसिक तनाव अहिलेको आम समस्या हो । कुनै न कुनै तनाव बोकेर मानिस बाँचिरहेको हुन्छ । फरक यत्ति हो, यसको मात्र कम या बढी हुन सक्छ । उसो त हरेक प्राणीमा मानसिक तनाव हुन्छ । जुन उमेर र रोगले त्यति धेरै अर्थ राख्दैन । यद्यपि, सबै मानिस तनावबाट मुक्त हुन चाहन्छन् । र, यसको बाटो खोजी नै रहेका हुन्छन् । ...
टीकाराम भट्टराई सुशीला कार्कीको महाअभियोग प्रकरणले जनसाधारण न्यायपालिका बहस घेरामा तानिए। गोविन्द केसीको गिरफ्तारी र वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको ज्यानै असुरक्षा भएको भनिएको प्रकरण पश्चात नेपालको न्याय जगत नै विवादको चरमोत्कर्षमा पुगेको छ। महाअभियोग प्रकरण प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सरकार हारेपछिको परिणाम थियो। अहिलेको प्रकरण प्रधानन्यायाधीशको मानमर्दन गरिएको विषयसँग जोडिएको छ। यतिबेला न्यायपालिकासँग प्रत्यक्ष साइनो नभएका आमजनता यसको पक्ष र ...
तिर्थाटन पर्यटनका लागि दाङको वाह्रकुने दह
के.वि.मसाल नेपालीहरुको धार्मिक र साँस्कृतिक चाडपर्वहरुमा पर्यटकहरु पनि जोडिने गरेका छन । नेपालमा पछिल्लो समय तिर्थाटनका पर्यटकको संख्या वर्षेनी बढिरहेको छ । पर्यटकको रुचि तिर्थाटनमा हुने गरेको पाइएको छ । त्यसैले ती तिर्थाटन क्षेत्र अहिलेसम्म पनि जीवन्त भइरहेका छन् । माघे संक्रान्ति, मकर संक्रान्ति, माघी आदि नामले चिनिने सास्कृतिक पर्व हो । यो पर्व माघ महिनाको पहिलो दिनमा पर्दछ । ...
माघीपर्व, थारु समुदाय र स्थानीय सरकार
प्रकाश चौधरी माघी पर्व अर्थात माघे संक्रान्ति सबै नेपालीहरुका लागि महत्वपुर्ण पर्व मानिन्छ । विशेष गरी यो पर्व परम्परागत सांस्कृतिक, धार्मिक र प्राकृतिक कन्दमुलको रुपमा तरुल, सखरखण्ड,चाकु खाने दिनका रुपमा परिचित रहेको छ । परापुर्वकालदेखी जाडो फाल्ने भनेर घ्युसंग खिचडी खाने प्रचलन संगै माघे संक्रान्तिको दिन देखी जाडो कम हुदै जाने विश्वास पनि गरिन्छ । माघी पर्व सबै नेपालीका लागि ...